'मर्जर गर्दा भोलि नै डिभोर्स हुने गरी गर्नु हुँदैन' : भुवन दाहाल, अध्यक्ष (बैंकर्स संघ /भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
32408504 987724 7495803 23924977
69301 453 18437 50411
‘मर्जर गर्दा भोलि नै डिभोर्स हुने गरी गर्नु हुँदैन’ : भुवन दाहाल, अध्यक्ष (बैंकर्स संघ /भिडियोसहित)
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:४०
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि मात्रै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो । सो समीक्षामा बैंकहरुले माग गरेका बैंकास्योरेन्स लगायतका केही मागहरु पूरा भएनन् । जसका कारण बैंकर्सहरुले गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाल बिदाई हुने बेलामा चित्त दुखाए । मौद्रिक नीति, विग मर्जर लगायतका विभिन्न विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग केन्द्रबिन्दुका लागि अर्थ ब्युरो प्रमुख कमला अर्यालले गरेको कुराकानीः
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याउनै लाग्दा बैंकान्स्योरेन्स लगायतका विभिन्न बुँदाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो । यो कुरा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेन । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
हामीले केही बँुदाहरु सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका थियौँ । जसमध्ये केही बुँदाहरु संशोधन भएका छन् भने केही बुँदाहरु संशोधन भएका छैनन् । हामीले उहाँहरुलाई धेरै विषयमा अनुरोध गरेका थियौँ । उहाँहरुले त्यसका लागि थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ भन्नु भएको छ । मलाई लाग्छ तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा यो सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ । सम्भवतः हामीले पठाएका पत्र तथा हामीले गरेका अन्तरक्रियाहरुबाट सम्बोधन गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा तपाईंहरुलाई चित्त नबुझेका कुराहरु के के छन् ?
अहिले आएको कुराहरुमा चित्त नबुझेको केही पनि छैन । सबै राम्रा चिजहरु आएका छन् । हामीले नै अनुरोध गरेको कुराहरु उहाँले ल्याउनु भएको छ । हामीले अलि बढी माग गरेका थियौँ अलि कम आएको मात्रै हो । बाँकी कुराहरु तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनै लाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा.चिरन्जिवी नेपालले तपाईंहरुसँग बिग मर्जरको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । तर तपाईंहरु विग मर्जरमा सहमत नभएको देखियो नि ?
मर्जरको पोलिसी अर्थमन्त्री ज्यू गभर्नर हुने बेलादेखि सुरु भएको हो । डा. चिरन्जिवी नेपाल ज्युले यसलाई आफ्नो कार्यकालमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु भएको हो । त्यतिबेला ८०–९० वटा डेभलपमेन्ट बैंकहरु थिए । फाइनान्सको संख्या पनि ८०–९० वटा थिए । अहिले घटेर २०/२५ वटामा झरिसकेका छन् । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २७ मा झरेको छ । चिरन्जिवी नेपाल सरले जुन पोलिसी ल्याउनु भएको थियो, त्यसमा उहाँ सफल हुनु भएको छ । भनेकै लेभलमा संख्या नघटेको होला । तर बिस्तारै घट्दै जान्छ ।
०७२/७३ मा डा. नेपालले मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्नुभयो, त्यतिबेला वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने उहाँको लक्ष्य थियो । तर उहाँले चाहे जस्तो बाणिज्य बैंकको संख्या घटेन । किन घटेनन् ?
खासै नघटेको भनेकोे वाणिज्य बैंक मात्रै होइन । फाइनान्स कम्पनी डेभलपमेन्ट बैंकहरु पनि त्यति नै छन् । ती धेरै संस्थाहरु त वाणिज्य बैंकमा आएर मिलेका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले बैंकहरुको संख्या घट्दै छन् । मलाई लाग्छ त्यसमा उहाँ सफल हुनुभएकै हो ।
यसरी संख्या नघट्दा वाणिज्य बैंकले बिग मर्जर नचाहेको हो कि भन्ने देखिन्छ , खास कुरा के हो ?
अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २७ मा झरेको छ । पहिलोपल्ट पनि बैंक अफ काठमाडौं र लुम्बिनी बैंकको मर्जर भएको थियो । अहिले ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंक मर्जर भयो । त्यो भन्दा अगाडि ग्राण्ड बैंक र प्रभू बैंकको पनि मर्जर भएकै हो । बैंक अफ एसिया र एनआइसीको पनि मर्जर भएकै हो । बिग मर्जर पनि नभएको होइन । पहिला पनि भइसकेको छ । मर्जर हतारमा गर्ने विषय होइन । २०० वटा संस्था घटेर ७० मा आइसकेको छ भने मर्जर नभएको त पक्कै होइन ।
अहिले सानिमा बैंकले मर्जरका लागि के गरिरहेको छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको बैंक तथा वित्तीय संख्या घटाउने उद्देश्य थियो । हाम्रो मर्जर कमिटी अहिले पनि बनेकै छ । कमिटीले विभिन्न प्लेयरहरु हेरिरहेको छ । मर्जर गर्न त्यस्तो किसिमको पार्टनर खोज्ने क्रम जारी नै छ ।
मर्जरलाई विवाहसँग तुलना गरिएको छ । प्रेम विवाह गर्दा ठिक कि मागी विवाह ?
पहिला सिङ्गल भएर काम गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । यसमा लभ एट फ्रस्ट साइटले काम गर्न सक्दैन । त्यो गलत हुन सक्छ । हामीले मर्ज (म्यारिज) त गर्‍यौँ तर भोलिपल्ट डिभोर्सको कुरा आयो भने मजा भएन । हामीहरु असन्तुष्ट भएर बसिरहनु पनि ठिक भएन । मर्जरका लागि चाहिने जुन आधारभूत कुराहरु छन्, मलाई लाग्छ हामीले यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने हतपतको काम लतपत हुनसक्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो अस्तित्व सकिन्छ भनेर घट्न नचाहेकाले सहमतिमा नआएका हुन् ?
मर्जर भनेको दुइटाको अस्तित्व लोप भएर नयाँ सिर्जना हुने पनि हुन्छ । मर्जर गर्दा दुइटै संस्था हराएर नयाँ संस्थाको सिर्जना हुन्छ । त्यसमा डराउनु पर्ने कुरा नै छैन । त्यसमा इगो लियो भन्ने म्यारिजमा डिभोर्स भए जस्तै मर्जर पनि हुँदैन ।
प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
गत वर्ष एउटा बैंक बाहेक सबै बैंकहरुले सीमा मिट गरेको अवस्था छ । मलाई लाग्छ, त्यो बैंकले पनि अहिले मिट गरिसकेको छ । त्यो क्षेत्रमा कर्जा प्रभाव भयो भने देशको आर्थिक विकास पनि राम्रो हुने, यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यो क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाहरु लागिपरेको अवस्था हो ।
जलविद्युत क्षेत्रको लगानी अरु क्षेत्रको तुलनामा बढी जोखिमयुक्त छ भन्ने कुरा छ नि । खास कुरा के हो ?
संसारमा जोखिम नभएको क्षेत्र त केही पनि छैन । जलविद्युत क्षेत्रको सन्दर्भमा बाढी पहिरोको जोखिमहरु छन् । प्रकृतिले हामीलाई जलस्रोतहरु दिएको छ । हामीले यी जोखिमहरुको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
बैंकहरुले आइटीमा कत्तिको लगानी बढाइरहेका छन् ?
हामी ब्रिक बैंकिङ्लाई क्लिक बैंकिङ्तिर लाने कोशिस गरिरहेका छौँ । अहिले पेपर करेन्सीले कोरोना सर्ने सम्भावना बढी छ भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । यो बेलामा पनि हामीले डिजिटल बैंकिङ्लाई प्रोमोट गर्नु पनि अत्यावश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पनि पेमेन्ट गेटवेको लागि काम गरिरहेको छ । उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । यसले राजस्व बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
बाफियामा बैंकहरुका सिइयो र संचालन समितिलाई कडाइ गरिने भन्ने कुरा छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सीइओहरुको दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुनु हुदैन भन्ने कुरा पहिला पनि आइसकेको छ । यसमा हाम्रो कुनै असहमति छैन । कुनै पनि बैंक सफल हुनुमा धैरै कुराहरुको हात हुन्छ । कर्पोरेट गभर्नेन्स कमजोर भएको बैंकमा धेरै खालका समस्याहरु आउँछन् । सीइओको उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो खासै असहमति छैन । तर हुनुपर्ने चाहीँ के हो जस्तो लाग्छ भने, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको संरचना ठिक भयो भने कोही मान्छे ७० वर्षमा पनि एकदमै इनर्जेटिक हुनसक्ला । कुन उमेरको मान्छे एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा निर्णयकर्ताले निर्णय गर्नु जरुरी छ । यसबारेमा संचालक समितिले निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा.चिरन्जिवी नेपालको पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
अहिले नेपालका ७५३ वटा स्थानिय तहरुमध्ये ७४५ क्षेत्रमा बैंकहरु पुगेका छन् । यसको श्रेय उहाँलाई नै जान्छ । सबै जोडेर झण्डै ९० प्रतिशत नेपालीहरुको बैंकमा खाता छ । नेपालका बैंकहरु पनि अहिले साउथ एसियामै बेस्ट भनेर आइरहेको छ । जुन नेपाल सरले गर्नुभयो, त्यो एकदमै सह्रानीय कामहरु छन् । अहिले आएर उपभोक्ताले मेरो ब्याजदर घटाइदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसको श्रेय पनि गभर्नर ज्यूलाई नै जान्छ । समग्रमा उहाँ एकदमै सफल गभर्नरको रुपमा बिदा हुनुभएको छ ।
यतिबेला चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले विश्व अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिँदै छ । नेपालको बैंकिङ् क्षेत्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
कोरोना भाइरसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको छ । बैंकिङ् क्षेत्रमा दैनिक कारोबार घटेको छ । भिडभाड पनि घटेको छ । सकेसम्म घरबाटै डिजिटल कारोबार गरौँ भनेर हामीले ग्राहकहरुसँग पनि आग्रह गरेका छौँ । अहिले आत्तिइ हाल्ने अवस्था चाहीँ छैन । तर पनि हामीले सर्तकता त अपनाउनै पर्छ ।
अध्यक्ष बैंकर्स संघ, भुवन दाहाल
Prevभारतको मध्यप्रदेशमा राजनीतिक संकट, मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा
उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरु बढेNext
“बैंकमा ‘फिजिकल मुभमेन्ट’ कम गरौं” : भुवन दाहाल (अध्यक्ष, बैंकर्स संघ / भिडियोसहित)
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्षले गरे आत्महत्या
वाग्मती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने योजनाहरु अपाङ्गता, महिला तथा बालमैत्री हुने
कोरोनाबाट बुटवलमा एक महिलाको मृत्यु
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही
राप्रपा विधान मस्यौदा समिति गठन
'संविधानको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक नियुक्ति हुनुपर्छ' : कांग्रेस
स्याङ्जा पहिरोमा मृत्यु भएका नौ जनाको सामूहिक दाहसंस्कार
आइपिएल : पञ्जाबद्वारा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर ९७ रनले पराजित
विदेशमा अलपत्र ७५ हजार स्वदेश फर्किए, ३५१ शव पनि ल्याइयो
विगत नौ वर्षमा बाढीपहिरोबाट साढे १६ अर्बको क्षति, ८ सय जनाले ज्यान गुमाए